Wake Up Oromo and Fighting back against the OPDO and G-7 Cadre's 'Fake News' and Disinformation. Kichuu
HomeAfaan OromooVideosWake Up Oromo and Fighting back against the OPDO and G-7 Cadre’s ‘Fake News’ and Disinformation.
WBOn Adda bilisa baasaa wallaggaa kan Geetachoo Asaffaa ti malee adda bilisa baasaa oromoo miti jettee olola sobaa afarsaa jirti opdo fi G-7 warreen jibba oromoo qabanis gargaaranii afarsaafii jiru.
WBOn Wallaggaa jiru harki caalaa loltuun jiranii fi Ajajaa WBO lixaa dabalatee Shawaa fi Qeerroo kutannoo qaban jiddu gala oromiyaa irraa deemanii itti hirmaachaa jiranii dha.
Ijoollee hidhaa wayyanee jala turan,maatiin jala wareegaman,Miidhaanadda addaa mootummaa wayyaneen irra gahaa turee dha.
Yaroo ammaa kana yaadaota tokkummaa oromoo adda qoodu irratti hojjetaa jiru.
Oromoonni hubannoo hin qabnes deebi’anii of abaaraa oolu.
Kabinnoonni opdo fi maatii isanis kan walgaharkaa fudhee olola sodaa fi jibba ABO qaban xureessuuf cilattii dibaa oolu.
Dhaabni cimaan EPRDF dabalatee oromoo phobia warreen qaban waggoota 27 tiif itti duulanii balleessu hin dandeenye.ABOn laphee fi dhiiga oromoo keessa kan jiru dha malee dhaba qofa miti.
Oromoon wallaggaa qofa jiraayyuu ? Jechaa jiru.
WBO Shaggar ,Boorana,Gujii kkf jiranoo WBO mitii ?
Ammas kunoo WBO Shaggar jiru adamsuun itti fufee jira.
Makkalakaayaan WBO Aanaa Jalduu jiru barbaacha deemaa ture WBO achi jiruun daraa botoroo ta’aa jirti.Ummanni aja’iiba jechaa jira Gootummaa fi dandeetti WBO.
Warreen otoo hin beekiin Warreen oromoo qoqqoodanii umna fi Tokkummaa oromoo diiguuf olola diinaa afrsaa oolan dura dhabbachuun harkaa fashaleessuun Dirqama qabsa’oota dhugaa kan bilisummaaf qabsa’aanii ta’uu qaba.
Sagalee Qeerroo bilisummaa Amboo !!
Miseensoti ABO-Shanee Eertiraa irraa galaani Moraa Ardaayta keessatti leenjii fudhaataan akkana jechuun dubbataan, yeroo Ummanni keenya Harargee irraa Hanaga Moyyaalee dhuumu nu bobbaasa jenne gafaane turee garuu Deebiin Keenyaa namani kana booda Bobbaa waraanaa gafaate Diina keenyaa wayyaaneetu isiin ergee nuun jechaa turaani jedhu. gurraa keessan keessaa guurii qulqulleessaati, waan WBOn jedhu qalbiin dhaggeeffadhaa!
Yaa Abiyyii jedhan ilmaan Taaddee Birruu!!Fake news